Jumladda CNC wax-soo-saarka iyo alaab-qeybiyaha | Saxnimada QY
Waa maxay wax-shiididda CNC?
Habka wax-shiidka ee CNC waa habka farsamaynta farsamada sare ee qaybaha qalabka saxda ah. Noocyo kala duwan oo qalab ah ayaa laga baaraandegi karaa, sida 316, 304 birta aan lahayn, birta kaarboon, birta alloy, aluminium alloy, zinc alloy, alloy titanium, copper, iron, acrylic, Teflon, ulaha POM iyo alaabada kale ee birta iyo caagagga ah ee ceeriin. Loo habeeyey qaab dhismeed kakan oo ah qaybo labajibbaaran iyo wareeg ah. Mashiinnada wax-shiidka ee CNC waxay u qaybsan yihiin laba nooc: iyada oo aan lahayn joornaal qalab iyo joornaal qalab. Waxaa ka mid ah, mashiinka wax-shiidka ee CNC oo leh joornaal qalab ayaa sidoo kale loo yaqaannaa xarun mashiineed. QY Precision waxay dabooli kartaa baahiyahaaga habayn ee kala duwan waxayna dammaanad qaadi kartaa keenista. Ku soo dhawoow nala soo xidhiidh oo soo dir sawiro ama muunad si aad u hesho oraah bilaash ah.
Wkoofiyaddu waa sifada?
Qaabka dusha sare ee farsamaynta mishiinka wax-shiidka waxa uu guud ahaan ka kooban yahay xariijimo toosan, geeso ama qaloocyo kale. Hawl-wadeenka mishiinka wax-shiidka ayaa si joogto ah u beddela booska qaraabada ah ee u dhexeeya gooyaha iyo workpiece-ka iyadoo loo eegayo shuruudaha sawirka, ka dibna wuxuu u dhigmaa xawaaraha jajabiyaha ee la doortay si uu u gooyo workpiece, wuxuuna ka baaraandegi karaa qaybo kala duwan oo qaabab kala duwan ah.
Ka-hortagga mashiinka wax-shiidka ee CNC waa in loo qaybiyo isku-duwayaasha dhaq-dhaqaaqa gooyyaha iyo qaybta shaqada ee tirada cutubka ugu yar, taas oo ah barokaca ugu yar. Sida laga soo xigtay shuruudaha barnaamijka workpiece ah, nidaamka xakamaynta tirooyinka guuro iskudubarid kasta by dhowr barakicin ugu yar, si ay u ogaadaan dhaqdhaqaaqa qaraabo ee qalabka iyo workpiece si ay u dhamaystiraan processing ee qaybaha.
Marka la barbar dhigo farsamaynta wax-shiidka caadiga ah, farsamaynta wax-shiidka ee CNC waxay sidoo kale leedahay sifooyinka soo socda:
1. Habayntu waxay leedahay laqabsi xoog leh iyo dabacsanaan, waxayna farsamayn kartaa qaybo leh qaabab gaar ah oo isku dhafan ama ay adagtahay in la xakameeyo cabbirka, sida qaybaha caaryada, qaybaha qolofka, iwm.;
2. Waxay ka baaraandegi kartaa qaybo aan la farsamayn karin ama ay adagtahay in lagu farsameeyo mashiinka caadiga ah, sida qaybo qaloocsan oo adag oo lagu sharraxay moodooyinka xisaabta iyo qaybaha dusha sare ee saddex-geesoodka ah;
3. Waxay ka baaraandegi kartaa qaybaha u baahan in lagu habeeyo habab badan ka dib marka la isku xiro oo la dhigo;
4. Saxnimada mashiinnada ayaa sarreeya, tayaduna waa mid deggan oo la isku halayn karo. garaaca garaaca wadnaha ee u dhigma qalabka xakamaynta tirooyinka guud ahaan waa 0.001mm, iyo nidaamka xakamaynta tirada saxda ah ee saxda ah wuxuu gaari karaa 0.1μm. Intaa waxaa dheer, farsamaynta xakamaynta tirooyinka ayaa sidoo kale ka fogaanaysa khaladaadka hawlgalka ee hawlwadeenka;
5. Heerka sare ee otomatiga wax soo saarka ayaa yarayn kara xoogga shaqada ee hawlwadeenka. Ku habboon in si toos ah loo maamulo wax soo saarka;
6. Wax-soo-saarka wax-soo-saarka ayaa sarreeya. Wax-shiidka CNC guud ahaan uma baahna qalab hab-socodka gaarka ah sida qalabyada gaarka ah. Marka la beddelo workpiece ah, waxa ay u baahan tahay oo kaliya in ay wac barnaamijka processing, clamping qalab iyo xogta qalab hagaajin ku kaydsan qalab CNC ah, sidaas darteed si weyn u soo gaabin wareegga wax soo saarka. Marka labaad, mashiinka wax lagu shubo ee CNC wuxuu leeyahay shaqooyinka mashiinka wax lagu shubo, mashiinka caajiska ah iyo mashiinka qodista, taas oo ka dhigaysa habka mid aad u xoog badan oo si weyn u wanaajinaya waxtarka wax soo saarka. Intaa waxaa dheer, xawaaraha lafdhabarta iyo xawaaraha quudinta mashiinka wax-shiidka ee CNC si joogto ah ayey u kala duwan yihiin, sidaas darteed waxaa waxtar leh in la doorto qaddarka goynta ugu fiican.
Hore: Mashiinnada CNC
Xiga: Jeedinta CNC
Cnc Milled Qaybta